२२ रुपैयाँमा नै छानी-छानी गर्लफ्रेण्ड ! - Nepali in Australia
August 31, 2021 August 31, 2021 autherLeaveaComment on २२ रुपैयाँमा नै छानी-छानी गर्लफ्रेण्ड !
मानिसहरुले व्यापारको लागि जस्तो पनि उपाय अपनाउन सक्छन् । हरेक मानिसले आफ्नो व्यापार राम्रो होस् भन्ने चाहान्छन् र त्यसलाई राम्रो बनाउनको लागि तौरतरिका अपनाउने गर्छन् ।आज हामी तपाइलाई चीनको एक अनौठो घटना बताउदैँ छौ ।
यो घटना सुन्दा अच्चम लाग्न सक्छ तर मुलुक चीनको सत्य घटना हो ।चीनको एक सपिङ्ग मलले ग्राहकहरुलाई भाडामा ग्रर्लफ्रेण्ड उपलब्ध गराइदिन्छ । यदि तपाईँले एउटा सर्त मान्नु भयो भने ती केटीहरुसँग २० मिनेट समय बिताउन सकिन्छ ।२२ रुपैया अर्थात ११ फिलिपिनो पिसोमा पाइने ती युवतीहहरुसँग तपाईले मज्जाले समय बिताउन सक्नुहुन्छ ।
उक्त सपिङ्ग मलको यो अफरपछि त्यहाँ युवाहरुको निकै भिड लाग्न थालेको छ । दक्षिणी चीको सहर हुआनमा वाइटैलिटी सिटी नामको सपिङ्ग मलमा यो अफर शुरु गरिएको हो ।यहाँ १५ सुन्दर युवतीहरु भाडामा राखिएको छ । यस मलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै ग्राहकका लागि युवतीहरु लाइनमा उभिएका हुन्छन् ।
उनीहरु मध्यबाट ग्रा’हकले आफूलाई मनपरेकी यु’वतीसँग समय बिताउँन सक्छन् । उनीहरुलाई भाडामा लिएर २० मिनेट मज्जाले डेटिङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ ।यो अवधिमा सपिङ्ग, डिनर, कफी, गफगाफ गर्न सकिन्छ तर ती युवतीलाई छुन भने पाइदैन ।एजेन्सी
पानीपुरीमा पि’साब मि’साइरहेको र’ङ्गेहात भेटियो, आफु पनि हेर्नुहोस र अरुलाई पनि स’चेत गराउउनुहोस